Soso-kevitra 10 hanatsarana Digg | Martech Zone
Soso-kevitra 10 hanatsarana Digg
Zoma, Septambra 22, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Ny pejy fandraisana dia tsy kendrena ho ahy ary tsy kendrena amin'ny fanatsarana ny haino aman-jery sosialy mihitsy. Ny pejiko Digg dia tokony misy ny digg an'ny namako tato ho ato, ireo diggs tato ho ato, ary koa ireo faritra misy atiny hafa azoko ampiana (arakaraka ny sokajy, sns.)
“Digg dia miresaka momba…” toerana very. Afindrao ny menio. Raha te hahafantatra aho hoe inona ilay Digg dia asio rohy momba izany. Maka trano tena sarobidy ianao.
Fanehoan-kevitra Pro / Con. Te hahita aho hoe iza no manana hevitra tsara indrindra HO AN'NY foto-kevitra iray, ary iza no manana lohahevitra tsara indrindra HANOHANA. Andao atomboka ny fifandonana. Tsy misy dikany ny fandefasana fanehoan-kevitra tsy misy farany.
Aiza aho no mitana ny laharana? Tsy mpitrandraka goavambe aho… fa tiako ho fantatra hoe aiza no misy ny tantarako amin'ny tranonkala ankapobeny. Iza ireo 10 mpady indrindra?
Esory io sora-baventy Diggnation Podcast goavambe io. Sheesh… mpandahateny kely mahafinaritra dia hisarika ny saina bebe kokoa amin'ny Podcast.
Alefaso ny hibitsibitsika, angamba resaka amin'ny Diggs mavitrika indrindra. Misintona ny mpiara-monina amin'ny fotoana tena izy.
Tags, tags, tags. Mitsoka ny sokajy misy anao. Tena manao izany izy ireo. Maninona raha avela ny olona hanisy marika ny fidirany mba hahafahako misoratra anarana amin'ny "CSS" (ohatra).
Tantara ho avy? Ahoana ny amin'ny tantara mandeha haingana? Tsy miraharaha ilay tantara mandringa ho avy aho. Fa raha nahazo diggs 10 tao anatin'ny minitra vitsy… maninona raha laharana haingana?
API? Maniry aho raha afaka manampy ireo tantara natoloko na natolotro tao amin'ny tranonkalako. RSS dia voafetra ihany… fa ny API hahafahako manao rindranasa.
Digg Alerts. Rehefa mamaky tantara ny namako Digg, ahoana no tsy ahazoako fampandrenesana?
Inona no atao hoe Permalink? Trackback? Post slug? Ping?
Satria toa manandrana ianao!
Sep 22, 2006 ao amin'ny 4: PM PM
Andininy 8: manaiky tanteraka. Ny hany zavatra ratsy kokoa noho ny mahita tantara mitovy amin'ny pejy fandraisana Digg mandritra ny tontolo andro dia ny mahita tantara tsy salama / mahatsiravina / mahatsiravina amin'ny pejy ho avy.
Sep 23, 2006 amin'ny 4: 22 AM
Point # 7 dia tena manelingelina. Voafetra ihany ny sokajy misy azy ireo, voatery nametraka zavatra vitsivitsy tao amin'ny Offbeat News aho noho ny tsy fisian'ny sokajy.
15 Nov 2006 tamin'ny 4:46 PM
Mikasika ireo tantara ho avy dia azo atao ny manasokajy ireo tantara ho avy amin'ny tena malaza fa tsy ny vaovao. Hitako fa izany dia fomba mora iray hijerena izay vaovao manafana indrindra indrindra amin'izao fotoana izao.
Manantena aho fa fanampiana kely izany. 🙂
Dec 11, 2006 ao amin'ny 4: PM PM
Mangataha dia hahazo ianao (raha ny amin'ny # 10):
Mar 16, 2007 amin'ny 10: 21 AM
Salama ry zalahy… raha liana amin'ny tranonkala hamoaka tantara ianao, izay azo itokisana sy azo itokisana kokoa noho ny Digg, andramo ny Profigg.com Tetikasa vaovao izay hanampy ny salantsalany sy ny habeny indrindra hampiroboroboana tantara izay tsy hahita fahitana mihitsy.
5 Nov 2009 amin'ny 5:04 maraina
Manaiky tanteraka an'io aho. Nandefa rohy be loatra tao amin'ny mombamomba ahy Digg aho. Saingy, tsy afaka mampitombo digg amin'io aho. Manantena aho fa hanampy betsaka ahy ireo fomba ireo.